Etu ị ga-esi chụọ Alpha - ysmụ nwoke Lovehụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Etu esi achu Alfa nkezi 3.9 / 5 si 84
32nd, ọ nwere echiche 339.7K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, Comedy, Drama, Akwụkwọ ntanetị, Yaoi
Yoon Wooyoung, nke ọdụdụ nwa nke ezinụlọ bara ọgaranya. Ego, mmuta, odidi, ihe nile zuru oke. Nanị ihe mgbagwoju anya ya bụ, ọ bụ omega na-azụ ahịa.
Agbanyeghị, mgbe otu abalị gachara Cha Kyungjoo, mkpụrụedemede kachasị, enwere mgbanwe dị egwu n'ahụ Wooyoung.
Omega kachasị sie ike n'ụwa, Yoon Wooyoung, zutere mkpụrụ alfa nke ọ na-agaghị echefu!
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ mango
Chapter 70 Nwere ike 11, 2021
Chapter 69 Nwere ike 4, 2021
Chapter 68 Nwere ike 4, 2021
Chapter 67 Nwere ike 4, 2021
The Turn Of ịghasa
H3: Obi Htọ Oké Mgbagharị
Grancrest Ọ dịghị onye
Kyouju Ka Shitsuji No Shizuka Na Seikatsu